GNOME: DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်သနည်း။ | Linux မှ
GNOME: DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ထားသနည်း။
ထုံးစံအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုပုံမှန်ပြောဆိုလေ့ရှိသည် GNOME (3.36, 3,34, 3.32, 3.30, အခြားသူများအကြား), သူတို့ရဲ့ extension များ သို့မဟုတ်အချို့အကြောင်း ဝိသေသလက္ခဏာ o မူလအက်ပလီကေးရှင်း အထူးသဖြင့်။
ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် GNOME ဆိုတာဘာလဲ။ y GNOME ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းသလဲ။။ နှင့်သင်တန်း၏, လက်ရှိအာရုံစိုက် metadistribution (Mother Distribution) DEBIAN GNU / Linux, လက်ရှိသောဖြစ်ပါတယ် 10 ဗားရှင်း, ကုဒ်နာမည် buster။ လက်ရှိများအတွက်အခြေခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောတူညီသော MX-Linux 19 (Ugly Duckling).
GNOME များစွာသောအခြားတစ်ခုဖြစ်သည် Desktop Environments (DE) သူ့အပေါ်အသက်တာကိုဖြစ်စေသည် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်။ နှင့်များစွာသောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးအတွက်ခဲ့သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ပုံမှန် (ပုံမှန်) ။
မှတ်မိဖို့လိုသည်၊ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် es:
"... ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူကိုဖော်ရွေပြီးအဆင်ပြေသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပေးသောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု။ ၎င်းသည်ဆွဲခြင်းနှင့်ဆွဲချခြင်းကဲ့သို့သောစွမ်းရည်ရှိသောအသုံးချပရိုဂရမ်များအကြားဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများဖြစ်သော Graphical User Interface ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်သည်။". ဝီကီပီးဒီးယား
တ ဦး တည်း graphical user interface (GUI) es:
"… user interface တစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုသည်ပုံရိပ်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်အရာဝတ္ထုများကို သုံး၍ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်း၏အဓိကအသုံးပြုမှုမှာစက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်ခု၏ Operating System နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုရန်ရိုးရှင်းသောအမြင်အာရုံပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပေးရန်ဖြစ်သည်". ဝီကီပီးဒီးယား
1 အားလုံး GNOME အကြောင်း
အားလုံး GNOME အကြောင်း
သူက၏နေ့စွဲအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် မတ်လ31999 နှင့်လက်ရှိတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် မဆိုအလွယ်တကူနှင့်ကြော့ရှင်းကိုင်တွယ်ခံရဖို့ဒီဇိုင်း GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း ကွန်ပျူတာထဲတွင်တပ်ဆင်ရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများနှင့်၎င်းအတွင်းရှိအခြားသူများအားအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။ operating system။ တစ်နည်းဆိုရသော်အသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာ၊
သင်တို့၏နာမ (GNOME) များအတွက်အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ် "GNU ကွန်ယက်အရာဝတ္ထုမော်ဒယ်ပတ်ဝန်းကျင်"။ ဒါဟာလုံးဝစင်ကြယ်သော၏ဖွင့်ထားသည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် (FRee နဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ - FOSS) ။
ဒါဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် GNOME စီမံကိန်း အရာပေါ်တွင်မူတည်သည် GNOME ဖောင်ဒေးရှင်း။ ထိုသို့ကိရိယာတန်ဆာပလာအပေါ်အခြေခံသည် GTK + ပါ.
၎င်းသည်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးအသုံးပြုသည် X ဝင်းဒိုးစနစ်ပြသမှုဆာဗာလက်ရှိနှင့်အတူ၎င်း၏ပေါင်းစည်းမှုတိုးတက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့် Wayland သို့ဖြင့် kinetic scrolling, drag and drop နှင့်အလယ်ခလုတ်နှိပ်ခြင်းစသည့်အင်္ဂါရပ်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
လက်ရှိထင်ရှားပေါ်လွင်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် စတင်ခလုတ် နှင့် main menu ကို applications များနှင့်ရွေးချယ်စရာ၏။ သူ စတင်ခလုတ် ဒါဟာဟုခေါ်သည် "လှုပ်ရှားမှုများ" ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖန်သားပြင်၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်ရှိပြီးသင်အား Workspace နှင့် windows များအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ နှင့်၎င်း၏လက်ရှိအသွင်အပြင်နှင့် configuration ကိုချက်ချင်းအပေါ်ပုံတွင်ပြသနေသည်။
၏လက်ရှိတည်ငြိမ်ဗားရှင်း GNOME Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ဗားရှင်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် 3.34.
အကြီးစားနှင့်အစိုင်အခဲ applications များ၏ဂေဟစနစ်။
လက်ရှိဗားရှင်း (GNOME 3) သည်အရင်းအမြစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအရင်းအမြစ်များ (RAM / CPU) များစွာကိုစားသုံးသည်။
၎င်းသည် Systemd အသုံးပြုမှုနှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည်။
တရားဝင် extension များ
GNOME အပေါ် DEBIAN ဝဘ်
ရွေးပါ GNOME Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် နှင့်အခြား utility ကိုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်း packages များအစုံ။
ကိုရွေးပြီး Reboot လုပ်ပါ GNOME Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောရှိခြင်း၏အမှု၌ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် installed နှင့်မရွေးချယ်ဘဲလျက် GDM3 ဝင်မည်မန်နေဂျာ.
မှတ်စု: စမ်းသပ်ပြီးနောက် GNOME Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် သင်တပ်ဆင်နိုင်သည် install လုပ်ပြီးလျှင် အပိုဆောင်းဇာတိအက်ပ်များနှင့်လိုအပ်သောပလပ်ဂင်များ ဥပမာအားဖြင့်ဥပမာ -
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Entorno de Escritorio» ၏နာမအားဖြင့်လူသိများ «GNOME», ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးအများဆုံးယနေ့တစ်ခု «Distribuciones GNU/Linux»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GNOME: DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ထားသနည်း။
၎င်းသည် installation manual တစ်ခုထက် Gnome monograph နှင့်ပိုမိုဆင်တူသည်။
Gnome သည် Debian ၏ default desktop တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးနောက်ကျသည်။
အသုံးပြုသူအသစ်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောအကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာ၎င်းတို့သည်အခမဲ့မဟုတ်သော Firmware လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုပြင်ပဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်တပ်ဆင်သူတွင်အကြံပြုလိမ့်မည်။
Autopilot ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆောင်းပါးအတော်လေးသေးသော်လည်း၊ ၎င်းသည် Linux နှင့်၎င်း၏ Desktop enviroments မှ scratch မှလာသူများအတွက်ကောင်းသောအစဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်တွင် GNOME သည်အတော်အတန်သေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် GNU / Linux Desktop Environments အားလုံး၏ပထမစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာမီ KDE / Plasma ထုတ်ဝေတော့မှာပါ။
Kernel 4.1 နှင့်ထို့ထက်ပိုသောဗားရှင်း Solus 5.4 ကိုစာရင်းပြုစုပါ